Rehefa nanatanteraka ny fisavana ny antontan-taratasy fanamarinana ny maha ara-dalàna ny fitaterana ireo tompon’andraikitra, dia hita fa azo avy amin’ny fitrandrahana an-tsokosoko ireo vatosoa ireo. Ankoatra izay dia nisy ihany koa tsy fahatomombanana hafa hita ka nitarika tamin’ny fanagiazana izany. Nalefan`ny zandary any amin`ny polisy misahana ny harena ankibon`ny tany ny raharaha. Mipetraka hatrany ny fiaraha-miasa eo amin’ny zandarimariam-pirenena sy ny polisin’ny harena ankibon’ny tany amin’ny fanaraha-maso sy fandraisana andraikitra toy izao. Tonga nijery ifotony ireo vatosoa ireo izay nohazomina eo anivon’ny sampandraharaha miandraikitra izany eny Ampandrianomby ny minisitry ny harena ankibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika Fidiniavo Ravokatra, ny sabotsy lasa teo. Tsara ny manamarika fa ny endrika fikirakirana harena ankibon’ny tany rehetra tsy nahazoana alalana ara-dalàna na fitrandrahana izany na fitaterana, dia voasazin’ny lalàna.